Uhlobo lokuBalisa: Izinto zeNgcaciso | Uncwadi lwangoku
Uhlobo lokubalisayo: Izinto zokubalisa
Encarni Arcoya | | Iincwadi, Ezahlukeneyo
Ngubani obhala izicatshulwa kwiprozi kufuneka azi ngokugqibeleleyo ukuba yintoni Uhlobo lokubalisa y zeziphi izinto eziyenzayo. Nangona kunjalo, ngakumbi kwasekuqaleni kunye nababhali abancinci kuyinto eqhelekileyo ukubona iziphene kwingxelo. Ukuba ufuna ukuba umsebenzi wakho olandelayo ubonakaliswe ngokuba nembali elungileyo, hlala ufunde eli nqaku sikunikezela ngalo namhlanje kwaye wazi ukuba zeziphi izinto ezisisiseko ezenza naliphi na ibali.
1 Imvelaphi yohlobo lokubalisa
2 Iimpawu zohlobo lokubaliswa
2.1 Izinto ezibalisayo
3 Umbalisi kunye nabalinganiswa: amanani amabini abaluleke kakhulu kuhlobo lokubaliswa
Imvelaphi yohlobo lokubalisa
Ngoku ukuba uyazi ngakumbi malunga nohlobo lokubaliswa, kuya kufuneka uyazi ukuba inemvelaphi. Sithetha nge Kwiminyaka ephakathi, kwaye ngokukodwa isuka eYurophu, ilizwekazi apho yaqala ukusetyenziswa kwezinye iindawo ngenjongo yokukhumbula iziganeko zembali, izithethe, abalinganiswa ababengamaqhawe, abaphathi abakhulu kunye nokuzonwabisa kwabo ...
Nangona kunjalo, kuyaziwa ukuba, eGrisi, UHomer nguye owakhokelela kulolu hlobo lweengxelo, Nangona wayengumlinganiswa owayesazi ukudibanisa iintlobo ezahlukeneyo (idrama, i-lyric, ingxelo ...) kwisicatshulwa esifanayo, into leyo bambalwa kakhulu ababhali abaphumeleleyo kwinqanaba leengcali.
Into elungileyo malunga noku kukuba, xa imisebenzi ebalisayo iqala ukuvela, yonyusa ukwanda kwabantu abancinci abafuna ukusungula ukubhala olo hlobo; Kwaye nakwiminyaka eyindumasi yabafundi abayithandayo, kungoko ke iphuhlisiwe njengoko siyazi ngoku.
Iimpawu zohlobo lokubaliswa
Kulo imisebenzi ebalisayo, umbalisi ubalisa isenzo okanye ukulandelelana kweziganeko apho uthotho lwabalinganiswa abekwe kwindawo ethile ngexesha lokumiselwa kwangaphambili bathatha inxaxheba. Onke la macandelo aba zizinto zokubaliswa (esiza kuzibona ngeenkcukacha ezingezantsi).
Ingxelo yoncwadi ichongwa ngokuziphindaphinda ilizwe eliyintsomi, nangona kwezinye iimeko kunjalo iinyaniso eziphefumlelwe yinyani. Nangona kunjalo, isengumbali oyintsomi ngenxa yokuba umbhali uhlala enegalelo kwiziqendu ezitsha ezenziweyo okanye ukuhlawulisa inyani ngokuqonda okungafaniyo kwaye ke kuyeka ukuba yinyani ye-100%.
Olunye uphawu lolu hlobo lwesicatshulwa kukuba umntu wesithathu uqhele ukusetyenziswa, nangona umntu wokuqala ehlala rhoqo xa ophambili ophambili ebalisa engumbalisi wencwadi.
Nangona ngaphambili kuhlobo lokubalisa kwakuqhelekile ukufumana iivesi, namhlanje eyona nto ixhaphakileyo kukuba ingxelo ibhalwe ngokupheleleyo kwiprozi.
Izinto ezenza ingxelo zilandelayo:
Umbalisi: Inokuba yeyangaphandle kwisenzo, ukuba inxulumene neziganeko zomntu wesithathu ngaphandle kokuthatha inxaxheba kuzo, okanye ngaphakathi, xa ibalisa ngeziganeko zomntu wokuqala njengomntu ophambili okanye ingqina leziganeko. Umbalisi wangaphandle uhlala ebalisa owaziyo kwaye wazi yonke into ngabo bonke abalinganiswa abenza lo msebenzi, kubandakanya neengcinga zabo kunye nolwalamano lwabo.
Abalinganiswa: Zizo ezo zibangela iziganeko ezahlukeneyo esizibona zibaliswa emdlalweni. Iimpawu zayo zidluliselwa ngezenzo zayo, iingxoxo kunye neenkcazo. Phakathi kwabalinganiswa, umlinganiswa ophambili uhlala emi ngaphandle, ngubani ophethe ubunzima besenzo kunye nomchasi omchasayo. Kwakhona, kuxhomekeke emsebenzini, sinokufumana ngaphezulu okanye ngaphantsi kweempawu zesibini.
Isakhiwo sebali okanye isenzo Yiseti yeziganeko ezenzeka kwibali. Ezi ziganeko okanye ezi ziganeko zibekwe ngexesha nasendaweni, kwaye zicwangciswe ngokwesakhiwo esilula njengakumabali okanye amabali, okanye ezintsonkothe ​​ngakumbi, njengakwiinoveli.
Ukongeza kwizinto esizibonileyo, zikhona nezinye ezibalulekileyo kwesi sitayile soncwadi, kwaye zihlala zisetyenziselwa ukucacisa, kungekuphela xa kufundwa, kodwa nokubhala. Zezi:
Ukusekwa kuhambelana nendawo, umzuzu, imeko ... apho isiza siza kwenzeka khona. Oko kukuthi, ubeka umfundi kwindawo yokuba eli yelenqe lenzeka phi, kwenzeka phi kunyaka, yeyiphi imeko yezopolitiko neyentlalo, kwaye abalinganiswa baphila njani.
Ngamanye amaxesha, ababhali abayihoyi le nto, kodwa bayashiya iingcebiso zokuba xa umfundi efunda, enze umbono wale meko. Amaxesha amaninzi iba ngaphezulu kokhetho lokufikelela kunokuba kufuneka unayo.
Nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ukubonelela ngokuqina ngakumbi kwisakhiwo kuba ibonelela ngeendlela ezinceda ukuphucula ngcono zonke izinto.
Isitayile yindlela athi umbhali akhule ngayo kuhlobo lokubalisa. Ngamanye amagama, sithetha ngesitampu sombhali, indlela yakhe yokusebenzisa ulwimi, izibonelelo zoncwadi ... Ngamafutshane, ukubhala kwakhe.
Umbhali ngamnye wahlukile, kwaye nganye inendlela enye yokubhala. Kungenxa yoko le nto, xa kufikwa kufundo, unokuyithanda okanye ungayikhuphi inoveli, kwaye ukuba uthatha enye indlela efanayo unokuba nezinye iimvakalelo zayo.
Umzekelo, kukho ababhali abanesimbo sokutyikitya esichaza iimvakalelo ezininzi ngamagama; Ngelixa abanye bengakwazi ukuyenza loo nto kwaye bazinciphise ekuchazeni kakhulu ukuze umfundi abe nayo yonke idatha kwaye abuyele engqondweni yakhe oko akufundayo ukuze abenamava abalinganiswa abanokuziva.
Okokugqibela, izinto zokugqibela zohlobo lokubaliswa ngumxholo. Yi le ehambelana nesiqwenga somxholo, Ngamanye amagama, iya kuchazwa yimbali ngokwayo. Kwaye kuxhomekeke kwityala, ungangena kwimbali yothando, eyimbali, yomcuphi (okanye inoveli yolwaphulo-mthetho), intsomi yesayensi, umxholo owoyikisayo ...
Konke oku kubalulekile ukuba ukwazi ukusukela, nokuba ibali liphakathi kwemixholo emibini, kusoloko kulungile ukwazi ukuba ungalifaka phi, zombini ukuze abafundi bale ndlela bayifumane, kwaye ukuze uye kubapapashi abohlukeneyo okanye upapashe kwaye ukhethe iindidi ezifanelekileyo.
Umbalisi kunye nabalinganiswa: amanani amabini abaluleke kakhulu kuhlobo lokubaliswa
Nangona ngaphambi kokuba sithethe nawe malunga nombalisi kunye nabalinganiswa, ezimbini zezona zinto zibaluleke kakhulu kuhlobo lokubaliswa, singathanda ukuphanda ngakumbi ngazo. Kwaye kunjalo ibaluleke okanye ibaluleke ngaphezu kwesiqwenga sebali ngokwaso. Ngapha koko, nangona le yokugqibela ingoyena ndoqo kwaye icingelwe kakuhle, ukuba umbalisi akakwazi ukubeka umfundi, kwaye abalinganiswa abaphuhliswanga ngokwenyani, ibali liphela linokuqhwalela kwaye liphulukane nomphunga.
Nangona besitshilo ukuba umbalisi kuhlobo lokubaliswa uhlala ebhalwa emntwini wesithathu, okanye kwinto yokuqala (zombini isinye), inyani kukuba inokubhalwa nakowesibini umntu. Ukwenza kube lula kuwe ukuba uqonde:
Umntu wokuqala: Umbalisi ikwangumlinganiswa ophambili ebalini, owenza ukuba wonke umsebenzi ugxile kuye, ukuze afunde ngeemvakalelo, iingcinga kunye nezenzo azibonayo.
Oku kunengxaki, kwaye ke kukuba awukwazi ukubaphuhlisa ngokupheleleyo abanye abalinganiswa kuba kuya kufuneka ujonge kwinto efunwa ngumlinganiswa oyintloko / ayenzayo / ayivezayo.
Umntu wesibini: Ayisetyenziswa kakhulu kolu hlobo, kodwa ufumana iincwadi apho isetyenziswa khona, kwaye iyakwenza oko njengesalathiso, inxulumene nomntu, into okanye isilwanyana.
Umntu wesithathu: Yeyona isetyenziswa kakhulu kuba ivumela ngokwenene ukuphuhlisa bonke abalinganiswa kunye nazo zonke iinyani. Yindlela yokuba umfundi angavelisi nje kuphela umlinganiswa ophambili, kodwa kunye nabalinganiswa. Ngale ndlela, uba ngumbukeli nje obalisa ngokwenzekayo, bathi, amava abalinganiswa, bobabini abaphambili kunye nabasesekondari, abakumgangatho ophakamileyo ...
Kwimeko yabalinganiswa, njengoko uyazi, umsebenzi wohlobo oluchazayo unokuba nabalinganiswa abaninzi. Kodwa kukho amanani amaninzi okubahlula. Kwaye ezi zezi:
Umkhuseli: Umlingiswa owenzelwa eli bali libaliswayo. Ngamanye amagama, lilizwi lokucula lomsebenzi. Le protagonist phantse ihlala ingumntu, isilwanyana, into ... Kodwa inye kuphela. Nangona kunjalo, kwimbali yoncwadi kuye kwakho imisebenzi emininzi, endaweni yomntu omnye ophambili, kuye kwakho uninzi.
Umchasi: Njengoko besitsho, lonke iqhawe lifuna umguvela. Kwaye lowo uchasene naye ngulo "villain", umntu ochasayo ophambili kwaye ofuna ukuba angaphumeleli. Kwakhona sibuyela koku kungasentla, ngokwesiqhelo kukho "into embi" enye kuphela, kodwa mininzi imisebenzi apho kukho ngaphezulu kwesinye.
Umlinganiswa onamandla: Le ndlela yokuyibiza kukubaluleka kokuchazwa kwabalinganiswa besekondari. Bangabalinganiswa abagcwalisayo ukunika ukomelela ngakumbi kuyo yonke, kodwa, ngokuba namandla kunye nokuhamba kunye nabachasi kunye nabachasi, baba sisixhobo esinamandla sokwalathisa amanyathelo ebali ukuya apho ufuna khona.
Iimpawu ezingatshintshiyo: Singatsho ukuba ngabalinganiswa bemfundo ephezulu, abo bacatshulwe amaxesha ambalwa kodwa bengenalo igalelo elibalulekileyo ebalini, kodwa bayindlela yokufumana umxholo kunye nabalinganiswa, kodwa ngaphandle kokubaphembelela.
Oko kwathethi, leliphi elona candelo linzima okanye into ebaliswayo ukuyicacisa? Ngaba ungomnye wabo baqala babe nesiqwenga kwaye ukongeza oonobumba okanye ngokuchaseneyo? Ndixelele ngokufutshane ukuba usondela njani emsebenzini wakho ekuqaleni kwawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Uhlobo lokubalisayo: Izinto zokubalisa
UFernando Cuestas obambe umfanekiso sitsho
Carmen, ndingakubhalela phi?
ICorxea Champuru sitsho
Oe, kwenzeka ntoni kuwe nomama wam inkawu qliao te vai funao nakwi cana pa la bethuna
Phendula uCorxea Champuru
I-wenas cabros del yutu ndingu-corxea champuru ndibhalisela itshaneli yam yutu ngayo yonke indlela yokucinga
oe inja qliao umfanekiso wentombazana endiyizobayo inkawu ctm etsijo copirai
iqanda inkosi encinci sitsho
Phendula i-huevito rey
ngathi uyangena sitsho
kabros elungileyo ktm
izingqinisiso zebhayibhile nceda
ElPepe (ndinguElPepeOriginal) sitsho
Awea wena, bendilindele olunye uhlobo lwezimvo kwi-eta mahian wes
ABDUSCAN (ifumaneka ngesiNgesi kuphela)
Yintoni imibongo ebonakalayo?